We Fight We Win. -- " More than Media ": ကချင် လူမျိုး များရဲ့လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကို We Fight We Win ထောက်ခံပါသည်။
ကချင် လူမျိုး များရဲ့လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကို We Fight We Win ထောက်ခံပါသည်။
We do not support war on Kachin state, we did not say any bad things about kachin. What's wrong with you guys?
သိပ်ကောင်းတဲ့ ရေးသားဖော်ပြချက်ဘဲ ဗမာတွေလဲ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ ကို စော်ကားအနိုင်ကျင့်နေတာ တွေ